लगानी | गृहपृष्ठ
सिभिल बैङ्कको लिलामीमा मागभन्दा बढी आवेदन
लगानी 106 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । सिभिल बैङ्क लिमिटेडले लिलामीद्वारा विक्री खुला गरेको लिलामी शेयरमा मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ । बैङ्कले सस्थापक तर्फको २९ लाख ९२ हजार २ सय १० दशमलव २५ कित्ता शेयर शिल...	बिस्तृतमा
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड -१ को नाफा १ करोड
लगानी 65 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड – १ ले वैशाख मसान्तमा रू. १ करोड ८ लाख आम्दानी गरेको छ । गत मसान्तमा यस योजनाले रू. ५१ लाख ४१ हज...	बिस्तृतमा
नेपाल बैङ्कको एफपिओ २ सय ८० मा
लगानी 488 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । नेपाल बैङ्क लिमिटेडले एफपिओ जारी गर्न मूल्य तोकेको छ । बैङ्कले प्रतिशेयर मूल्य रू. १ सयमा रू. १ सय ८० प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता रू. २ सय ८० मा सार्वजानिक निष्कासन ग...	बिस्तृतमा
सूर्योदय लघुवित्तको अवितरीत हकप्रद आइतवारदेखि लिलामीमा
लगानी 101 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । सूर्योदय लघुवित्तको अवितरीत हकप्रद शेयर आइतावारदेखि लिलामीमा विक्री खुला हुने भएको छ । कम्पनीले फागुन २४ देखि चैत २९ गतेसम्म हकप्रद जारी गर्दा वितरण हुन नसकेको संस्था...	बिस्तृतमा
सानिमा इक्वीटी फण्डको आय १ करोड ८२ लाख
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । सानिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सानिमा इक्वीटी फण्डको वैशाख मसान्तमा कुल आय रू. १ करोड ८२ लाख पुगेको छ । यस योजनाको गत मसान्तमा आय ऋणात्मक रहेको थियो । वैश...	बिस्तृतमा
कामनाको अवितरीत हकप्रद बाँडफाँट तथा रकम फिर्ता
लगानी 113 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । कामना सेवा विकास बैङ्क लिमिटेडले अवितरीत हकप्रद शेयर जेठ १० गते बाँडफाँट गरेको छ । बैङ्कले संस्थापक र सर्वसाधराण गरी कुल ८ लाख ४९ हजार ९ सय ६३ दशमलव ७७ कित्ता शेयर बा...	बिस्तृतमा
लगानी 37 views
जेठ ११, काठमाडौं (अस) । मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडले ३१ दशमलव ४७८ प्रतिशत बोनस शेयर २०७४ पुस ३ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गरेको छ । उक्त बोनस बैङ्कको १२ औं वार्षिक साधारण सभ...	बिस्तृतमा
लगानी 41 views
काठमाडौं (अस) । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक चयन भएका छन् । कम्पनीको बिहीवार सम्पन्न प्रथम वार्षिक साधारणसभाले डा. आत्माराम घिमिरे, सुभाष अमात्य, रामेश्वर सापकोटा तथा मनिराम पोखरेललाई स...	बिस्तृतमा